နံရံ စိမ်းစိမ်း: May 2010
လျားစီးစင်းသွားပုံ၊မျက်နှာဖုံးပန်းချီ၊LayOut ဒီဇိုင်း၊တန်ဖိုး၊ခေတ်ကို ကိုယ်စားပြု၏/မပြု၏ ။လန့်ပြီး ဖတ်လက်စ ကဗျာစာအုပ်ကိုပြန်ချထားလိုက်တယ်။မနေ့ကမပြောဖြစ်ခဲ့သမျှစာသားတွေကအခုဒီစာမျက်နှာမှာ
ရောထည့်လိုက်တယ်။ဆက်ပြီး အရေးအသား၊ ၀ါကျဖွဲ့ထုံး၊ ကံ၊ ကတ္တား၊ နာမ်၊ နာမ်မ၀ိသေသန၊ ကြိယာ၊ ကြိယာဝိသေသန၊ ပုဒ်ထီး၊ပုဒ်မတွေကိုလိုအပ်နေပေမယ့် ဒီကဗျာထဲမှာတော့ ချန်ရစ်ခဲ့တော့မယ်။လိုသလို
ဖြည့်စွက်ဖတ်ရှု့နိုင်သည်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတစ်ခါတည်းပြောခဲ့လိုက်မယ်။“ လမ်း/လန်း ချင်းတူရင် လူချင်းတွေ့မှာပါ”
ပျောက်မဟုတ်တောင်Gtalk ထဲမှာတွေ့ဖူးသလိုလို၊VZO နဲ့စကားပြောဖူးတော့ သလိုလို၊Facebook
ထဲမှာသူငယ်ချင်းဖြစ်နေသလိုလို၊ မင်္ဂလာပါ၊Hello! ၊တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်၊နေကောင်းလား၊
Long time no see. ၊နူတ်ဆက်ပါတယ်၊ နောက်ထပ်တွေ့ကြတာပေါ့၊ကောင်းသောနေ့/ည
ဖြစ်ပါစေ Bye Bye :) စသဖြင့် စသဖြင့် အချက်အလက်စုံလင်စွာအပြင်ဖက်ထွက်ရပ်ပြီး လက်ကိုင်ဖုန်းပြောသလို ပြောနေမိတယ်။
ဘယ်လိုပဲပြောပြော၊ဘယ်လိုပဲဆိုဆို မင်းက အင်ဂျင်နီယာကြီး၊ဘာဆေးသောက်သောက်၊ဘာဆေးပဲထိုးထိုး ဘာမှမတိုးတော့တဲ့မင်းကဆရာဝန်ကြီးဘ၀ထဲကို ခုန်ဝင်လာတဲ့စူပါဖရိုက်ဒေး ဆိုလား၊ဘာလား။ အဲဒီနေ့မှလာခဲ့ကွာ။တွေ့ကြတာပေါ့၊အခုတော့
၊မောနေပြီလား။လွမ်းနေသေးလား။မဖြေပေမယ့်မေးခွန်းတွေပဲထပ်မေးနေမိတယ်။ဒီလောက်ဆို ဖတ်ရတာအဆင်ပိုပြေမှာလား။ အပေါ့၊အငန်၊ အစပ် အတွဲအဆက်၊ အနက်အဓပ္ပါယ် ချိတ်ဆက်မိရဲ့လား။ လူလုပ်လောကကြီးထဲ
မြိတ်ပီတာစဘတ်ကိုရွေ့ပြောင်းသွားတဲ့ ကိုပိုင်ကလည်း“ငါတို့ကအထက်တန်းစားကဗျာဆရာတွေ မဟုတ်ခဲ့ဘူး” ဆိုပြီးငြင်းဆန်သွားဖူးတယ်။ထပ်ပြောခဲ့မယ် (၃၃)လမ်းဟာ လမ်းတိုလေးပါ၊(၃၃)လမ်းဟာ လမ်းဖြောင့်ကလေးပါ၊
အခုရေးနေတဲ့ကဗျာ ဟာ ဆိုလိုရင်း / လိုရင်းရောက်မရောက်။ရည်ရွယ်ထားတဲ့သက်မှတ်ချက်ပြည့်မှီနိုင်/ ပြည့်မ မှီနိုင်။အစကနေ နောက်တစ်ခေါက်လောက် ရွတ်ပြနိုင်ရင်ပိုပြီးကောင်းမလား။မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း
ရသေးဘူး၊ချစ်သူမရှိသေးဘူး၊လိုင်းလည်းကျနေတယ်၊ဘိုင်လည်းကျနေတယ်။အနာဂတ်ဆိုတာတိမ်တွေရွေ့လျားပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းနေသလိုမျိုးလေ။မင်းရယ်မောသံလေးထဲကို စက်ဘီးလေးစီးဝင်၊သစ်ကိုင်းခြောက်လေးပစ်ထည့် ကစလို့
ကဗျာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး၊ကဗျာယဉ်ကျေးမှုအဆင့်တိုးမြှင့်ပေးရေး၊မှတ်ပုံတင်ကြေးပေးသွင်းပြီးကဗျာဆရာပါတီထူထောင်ရေး၊ကဗျာဆရာများစည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ကဗျာဝါဒများတပြေးညီသက်မှတ်ရေး အစရှိသဖြင့် ကဗျာဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့စီးဆင်းနေတုန်း
ညီလေးဒီညဘတ်(စ်)ကားခလေး/TAXI ဖိုးလေး မစခဲ့ပါဦးဆိုတာတွေ။
အရသာရှိမှုလေးကို ကဗျာလိုရေးသားထားတဲ့ စာသားတွေ၊အရေးအသားတွေအပေါ်
ပို၍ပို၍အဆင်ပြေစေမှာလား။ သင်္ကေတ၊နိမိတ်ပုံ၊၀ါဒ၊ဘာသာဗေဒတွေကိုအသုံးပြုပြီး ဖတ်လို့မကောင်းတဲ့ကဗျာကို ဒီစာမျက်နှာမှာတင်ခြေရာလက်ရာမပျက်အသေသတ်ပစ်လိုက်မယ်။ပြီးမှ Gtalk ထဲကနေ Sign Out လုပ်လိုက်သလို
ကဗျာဆရာဘ၀ထဲကနေ အခုပဲ Sign Out လုပ်ပြီးနူတ်ထွက်ခဲ့တော့မယ်။
၁၂ ဧပရယ် ၂၀၁၀
Posted by kothit at 9:17 PM0comments Links to this post
အိပ်ယာက နိုးနိုးချင်း သတိရနေမိတယ်၊ သူ့ အက်ဆစ်ကန်ထဲ ယဇ်ကောင်လို ဘဝတစ်ခုလုံးလောင်ကျွမ်းပျက်စီးဖို့၊
သူ့ နှုတ်ခမ်းဖျား ဓားသံလျက်ပေါ်က စတော်ဘယ်ရီရနံ့လေးကို စုပ်ယူဖို့၊ သူ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို တားမြစ်ဆေးဝါးလို သွေးကြောထဲ ထိုးသွင်းဖို့၊ သစ္စာတရားကို ဖဲကြိုးအနီနဲ့ စည်းနှောင်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄အရောက်ပို့ဆောင်ဖို့၊
တကယ်ဆို ဘဝက သိပ်ကိုတိုတောင်းလွန်းတယ်၊ အချိန်တွေက တိုတောင်းလွန်းတယ်၊ မသေချာတာတစ်ခုလောက်
ဘဝဟာ မသေချာ၊ မရေရာ၊ နောက်ကို ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ရင် ရှုမျှော်ခင်းတွေလို ရိပ်ကနဲ ကျန်ရစ်ခဲ့မှာပဲ၊
တစ်ခါတစ်လေ သူ့သွေးခုန်နှုန်းတိုးတိုးလေးကလွဲရင် အရာရာဟာ မှောင်မိုက်တိတ်ဆိတ်လို့ပဲ၊ လူနှစ်ယောက်၊ နှလုံးသားချင်းဆက်အမြွှာ၊ အသက်တစ်ခုထဲ ဆက်နေတာ၊ သဘာဝ တောတောင်ရေမြေ နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတာ၊ တိတ်ဆိတ်လွန်းတော့ သိစိတ် အာရုံခံစားမှုကမ်းပါးတွေ အားလုံး တစ်ဝုန်းဝုန်း ပြိုကျနေတာ၊ သူ့သွေးကြောတွေထဲ ဆောက်တည်ရာမရ ပြေးလွှားနေမိတယ်၊ မကြားနိုင်ပေမယ့် သူ့နာမည်ကို အသံကုန်အော်ဟစ်နေမိတယ်၊
တကယ်ဆို ဘာကိုမှ အသေအချာမျှော်လင့်မထားဘူး၊ မျှော်လင့်ချက်ဟာ မျှော်လင့်ချက်ရှိမရှိ မသေချာသေးဘူး၊
ထိစမ်းမိသမျှ ဖြန်းကနဲ ပြိုကျသွားမယ့် ဖန်သားနံရံတွေ၊ မြက်ပင်လေးတစ်ပင် လှုပ်ခတ်ရုံနဲ့ ဝုန်းကနဲ အလန့်တကြားထပျံသွားမယ့် ငှက်တွေ၊ ငါရှာဖွေနေ၊ သွေးရူးသွေးတန်း တည်ဆောက်နေမိတယ်၊
သူ့အိပ်မက်တွေထဲ၊ အဓိပ္ပါယ်တစ်စုံတစ်ရာ၊ နက်ရှိုင်းသော၊ မှော်ရုံ၊ ဂီတ၊ ငါ့အတွက် သူ့ဘက်က နာမဝိသေသနတွေ၊ မီးလောင်နေတဲ့ စာသားတွေ၊ ဆွံအ၊ တိတ်ဆိတ်နေတယ်၊ ပြေးလွှား၊ ဆူညံအော်ဟစ်နေတယ်၊
သူ့ရယ်သံလေးကို သူမသိအောင် ခိုးယူနေမိတယ်၊ သူ့မျက်ဝန်းတွေထဲ တိတ်တိတ်ကလေး ခုန်ဝင်နေမိတယ်၊ သူ့အပျော်အမောထဲ စမ်းချောင်းလေးလို စီးဝင်နေမိတယ်၊ သူ့ရှေ့ မှာ ဘဝတစ်ခုလုံး ထစ်အနေတဲ့ တိပ်သားတစ်စပမာ၊ နှလုံးသားတစ်ခုလုံး အစွယ်ကျိုး ခြေဝတ်ပုဆိုးပမာ၊ ငါ့သစ္စာတရားကို ပဝါစိမ်းလို ရင်ညွှန့်မှာစည်းထားပါ၊
သနပ်ခါးထူထူလိမ်းပြီး ငါ့စိတ္တဇကို ခေါင်ရမ်းပန်းလို ပန်ဆင်ပါ၊ ငါ့နှလုံးသားမြို့ရွာတစ်ခုလုံး အနာအဖျားကင်းအောင် စောင့်ရှောက်ပါ၊ အဲဒီလို ငါ့ကိုယ်ငါအော်ခေါ်ပေမယ့် ငါ့အသံငါမကြားရဘူး၊ ငါ့စိတ္တဇကို ငါမမြင်နိုင်ဘူး၊
သူ့ရဲ့  ဖြူစင်သော၊ မာယာ၊ သူ့အ၀ိဇ္ဇာနဲ့ နေ့တွေ၊ ဝေဝါး၊ ချိုမြိန်နေ၊ နာကျင်နေတာ။ ။
Posted by kothit at 9:15 PM0comments Links to this post
ငါအရမ်းစိတ်ပူနေတယ်ကွာ. . .
ခေါင်းလောင်းထိုးသံလေးကို ရပ်စောင့်နေကြလေရဲ့ . . .
တသီကြီး ဆွဲခေါ်သွားလေရဲ့ . . .
စိတ်ချ နင့်ကိုငါဘယ်တော့မှ မမေ့ပါဘူးအေးမိစံ
ခေါင်းတလားနဲ့တူတဲ့ မော်တော်ဘုတ်ထဲ မဆင်းမီ
ငါ့ကို ပြောစရာစကားတွေ ရှိသေးတယ်ဆိုတာ
ဘဝရဲ့လွမ်းစရာ အကောင်းဆုံး ဇုံပေပဲ
သူ့အပေါ်ထားတဲ့ ငါ၏ ချစ်ခြင်းများဖြင့်
သူမတစ်ယောက် ကောင်းရာ သုဂတိလားပါစေ. . .
“ ဆရာမလေးကော” လို့မေးလာရင်
ငါဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ. . .ကျော်သူ
မတက်ရောက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့. . .
“ဒါဝင်” ကို သတိရရင်တောင်
မော်ဒယ် “အန်နာနစ်ကိုလ်စမစ် ” ကို လွမ်းတဲ့အခါလည်း
အခု သူ့ကိုငါ လွမ်းနေပြီလေ
ဘယ်မလဲ သူမရဲ့ အုတ်ဂူ
ဘယ်မလဲ သူမရဲ့ အရိုးအိုး
နောက်ထပ် သေနတ်မှန် ခံရပြန်ပြီ. . .။
Posted by kothit at 9:11 PM0comments Links to this post
ရှင့်ခေါင်းထဲမှာ တစ်လက်လက်တောက်ပနေတဲ့ အတွေးအခေါ်တစ်ခု
ဒါမှမဟုတ် ထိလိုက်တာနဲ့ ငြိသွားမယ့် ဓားမြှောင်တစ်ချောင်း
ကျွန်မ ဆိုးထားတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီမှာ ဆိုင်ယာနိုက်အဆိပ်ရှိတယ်
ရယ်မောနေတဲ့ ကျွန်မကိုယ်ပေါ်မှာ ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုကို ရှင်တွေ့မယ်
ကျွန်မ မကြိုက်တာ ရှင်တို့ယောက်ျားတွေက
လူရှေ့ သူရှေ့ မရှောင်ထုတ်ပြတတ်တဲ့
အခုကိုပဲ ရှင်ဟာ မျက်လုံးနဲ့
ကျွန်မကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်တွေကို တစ်လွှာချင်း ဆွဲဖြဲပြီး
ကျွန်မခန္ဓာကိုယ်ကို တစ်စခြင်း စုပ်ယူနေပြီလေ
တကယ်တော့ ကျွန်မတို့ရွေးရမှာ နှစ်ခုထဲက တစ်ခု
ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်မ ကံကြမ္မာနဲ့ ကျွန်မရွာအကြောင်းမပြောပါနဲ့
ကျွန်မဆံပင်တွေ စိမ်းချင်စိမ်း ပြာချင်ပြာမယ်
ကျွန်မ ပါးပေါ်ကမှဲ့ နီချင်နီ နက်ချင်နက်မယ်
ကျွန်မဆီလာတဲ့အခါ အခန်းတံခါးကိုဖြည်းဖြည်းပိတ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့
ကျေးဇူးပြုပြီး မီးခြစ်ကလေး လှမ်းလိုက်စမ်းပါ
ကျွန်မနာမည် ဆိုဖီယာ . . .။ ။
ပန်းအလင်္ကာ၊ မေ၊ ၂၀၁၀
Posted by kothit at 9:09 PM0comments Links to this post